कपाल लामो र बाक्लो बनाउने घरेलु उपाय ! - समृद्ध नेपाल
काठमाडौँ । भनिन्छ, महिलाको सौन्दर्य उसको कपालमा पनि हुने गर्दछ। लामो कालो मुलायम कपाल बनाउने धेरेको चाहना हुन्छ।यही चाहनालाई पुरा गर्नका लागि विभिन्न किसिमका हेयर केमिकलको प्रयोग समेत गर्ने गछौँ । यस्ता विभिन्न केमिकलको प्रयोगले कपाल बढ्नुको साटो उल्टै झर्ने समस्या थपिन सक्छ।त्यसै जति सक्यो घरेलु उपाय अप्नाउनु निकै उत्तम मानिन्छ। आज हामी तपाईलाई कपाल लामो बाक्लो र मुलायम बनाउने घरेलु उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ।
कपाल लामो बनाउन यी घरेलु उपाय अप्नाउनुहोस्मसाज तेल मसाज कपाललाई लामो गर्ने सबैभन्दा राम्रो प्राकृतिक उपाय हो । मसाज गर्नुभन्दा पहिले तेललाई हल्का तताउनुहोस् र मसाज गर्नुहोस् । मसाजबाट कपाललाई पोषण प्राप्त हुन्छ अण्डा अण्डाको सेतो भागमा थोरै जैतूनको तेल वा मह हालेर राम्रोसँग फिट्नुहोस् र यसलाई कपालमा लगाए एक घण्टासम्म छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई स्याम्पु लगाएर राम्रोसँग नुहाउनुहोस् । यसो गर्नाले कपाललाई चाहिने आवश्यक पोषक तत्व पूर्ती हुन्छ र कपाल राम्रोसँग बढ्छ।
मेहेन्दी एक कप मेहेन्दी पाउडरमा आधा कप दही मिसाएर करिब २ घण्टा यत्तिकै छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई टाउकोमा लगाउनुहोस् र सुकेपछि पखाल्नुहोस् । मेहेन्दी लगाउँदा कपाल बलियो र बाक्लो हुने गर्दछ।अमला अमलामा क्यारोटिनायडजस्ता पोषक तत्व हुने भएकाले यसले कपाललाई बढ्न सहयोग गर्दछ । अमलाको जूसलाई हप्तामा एक पटक कपालमा लगाउँदा कपाल तीब्र रुपमा बढ्ने गर्दछ ।आलूको रस आलूले कपाललाई निकै छिटो बढ्न सहयोग पनि गर्दछ । नुहाउनुभन्दा पहिले टाउकोमा आलूको रस लगाउनुहोस् त्यसपछि १५ मिनेछ पछि कपाल पखाल्नुहोस्। आलूमा पाइने भिटामिनले तपाईंको कपाललाई लामो बाक्लो र बलियो बनाउँछ।मेथीमेथीलाई पिन्नुहोस् र त्यसमा थोरै पानी हालेर पेष्ट बनाउनुहोस् । यसलाई कपालमा लगाएर आधा घण्टासम्म छोडिदिनुहोस् र पानीले पखाल्नुहोस् । यसले कपाल तिब्र रुपमा बढ्छ र कपालको चायाँ छ भने पनि हट्छ।
सयौ मान्छे भित्र रहेको भवनमा आगलागी ! ४० जनालाई जिवितै उद्धार !
सुन्दरीजल पुगेर विना मगरले भनिन्, ‘मेरो मेहेनतले मेलम्चीको पानी काठमाण्डौंमा आएको हो’ !
इन्जिनियर हुँ भन्दै बिहे गरेको केटो १० कक्षा पास मात्रै !
आगो लगाउने ७९ वर्षीय बृद्ध अष्ट्रेलिया प्रहरीले पक्राउ गरेका छन् !
केहीबेर अघिसम्म फोनमा कुरा गरेकी बहिनी एकै छिनमा मुर्दा घरमा भएको खबर पाउँदा दिदीको होस् उड्यो !
शुष्माले घरैमा केटा ल्याएर राख्थिन् ८ बर्षकी छोरी आमा बसेको कोठामा जान खोज्दा आउँन दिन्थिनन् !
भारतबाटै विश्वभर कोरोना भाइरस फैलिएको वैज्ञानिकको दाबी